Fikarohana momba ny firaisana Ny Trangam-panjakan'Andriamanitra any Niccolo Paganini | Yngwie J. Malmsteen - Fikarohana momba ny vatana teraka
Tolo-kevitra nataon'i: Marcio HA Wanderley
Article by: Marcio HA Wanderley, navoakan'i Walter Semkiw, MD
Ity tranga ity dia fanamboarana mpanohana ReincarnationResearch.com, Márcio HA Wanderley, izay nanoratra lahatsoratra iray, izay omena etsy ambany:
"Yngwie Malmsteen Teraka tany Stockholm, Soeda, tamin'ny volana 30, 1963. Ny zanaka faralahy indrindra ao an-tokantrano izay ahitana an'i Rigmor reniny, Ann Louise sy i Bjorn rahavaviny, Yngwie dia tsy liana tamin'ny mozika. Na izany aza, tamin'ny volana 18, 1970, Yngwie dia nahita fahitalavitra manokana tamin'ny nahafatesan'ny Jimi Hendrix gitara iconoclast. Yngwie, fito taona, dia nijery tamim-pahatahorana an'i Hendrix namakivaky ny mpanatrika tamim-pahaverezana ny fanehoan-kevitra ary namono nahafaty ilay gitara tamin'ny lelafo. Ny andro nahafatesan'i Jimi Hendrix dia teraka ny Yngwie gitara.
Ny fampiharana ny fahalianany sy ny fahaizany mamikitra amin'ny Mositer taloha iray ary avy eo Stratocaster mora vidy, dia nilentika tamin'ny mozikan'ireo tarika toy ny Deep Purple i Yngwie ary nandany ora maro nanazarana ny hianarana ny hirany. Ny fankafizany an'i Ritchie Blackmore dia nilalao kilasika teo amin'ny kilasy dia nitondra azy niverina tany amin'ny loharano: Bach, Vivaldi, Beethoven, ary Mozart.
Yngwie Malmsteen nisintaka an'i Niccolo Paganini
Rehefa noraisin'i Yngwie ireo rafitra klasikan'ireo tompon'andraikitra, dia nanomboka niova endrika ny lokony. Tamin'ny taona 10, nanomboka nifantoka tamin'ny herin'ny mozika rehetra izy. Ny reniny sy ny anabaviny, izay mpandala ny talenta, dia nanaiky ny fanomezam-pahasoavany manokana ary nanome azy fanohanana sy fampaherezana. Nandroso haingana ny fahaizan'ilay fitaovana. Tao amin'ny fahatanorany i Yngwie dia nahita fahitana tamin'ny televizionan'ny Goneon Kremer, Goneon Kremer, izay nanao izay tena sarotra 24 Caprices ny violonista virtuoso 19thio Niccolo Paganini. Nanaitra lalina ny vokatr'izany, ary i Yngwie dia nahatakatra tamin'ny farany ny fomba hampifangaroana ny fitiavany ny mozika klasika amin'ny fahaiza-manaony gitara ary manampy ny charisma.
Tamin'ny taona 15 dia nanomboka nipoitra ny fomba amam-panaon'i Yngwie. Niasa nandritra ny fotoana fohy izy tamin'ny luthier tao amin'ny fivarotana fanamboarana gitara, izay nihaona tamina vozona voakaikitra tamin'ny voalohany rehefa nisy lokanga tamin'ny taonjato faha-17 niditra tao amin'ilay fivarotana. Nahaliana azy i Yngwie, ka nibolisatra ny vozon'ny gitara taloha tamin'ny fomba mitovy amin'izany ary gaga izy tamin'ny valiny mba hanandrana izany amin'ireo gitara tsariny. Ny tabilao misy scalloped dia somary sarotra kokoa ny nilalao noho ny hatoka mahazatra, saingy nihatsara ny fifehezany ny tadiny ka nalain'i Yngwie avy hatrany ho fanovana maharitra ny fitaovany.
Tamin'ny faran'ny 1982 dia nentin'i Mike Varney avy any Shrapnel Records tany Etazonia i Malmsteen, izay nandre horonam-peo momba ny lalaon'i Malmsteen. Shrapnel dia mitovy dika amin'ny fomba mozika efa simba. Izy dia nifamotoana vetivety tamin'i Steeler, ho an'ny rakipeon-dry zareo mitondra ny lohateny hoe 1983, avy eo Alcatrazz, ho an'ny laharana 1983 Tsy misy parole avy amin'ny Rock N 'Roll, ary ny 1984 ny album mivantana Live Sentence. Niala tao Alcatrazz tao 1984 izy, nosoloin'i Steve Vai, ary nanomboka ny asany solo.
Ny asan'i solo'i Yngwie dia natomboka tamin'ny alàlan'ny rakipeon'olon-tokana antsoina hoe "Rising Force" izay mirakitra mozika betsaka amin'ny fitaovana. Ny fomba filalaovany "violon" ary ny hatsarany dia azo re amin'ny hira toa azy Lavitra ny masoandro ary Little Savage. Ny hazavana avy amin'ny tselatra dia mihazakazaka ary ny arpeggios dia nanao legioma mozika izay liana amin'ny hoe iza io mpilalao gitara io. Ohatra iray lehibe amin'ny fahombiazany ny hira Trilogy Suite Opus 5 avy amin'ilay rakikira antsoina hoe Trilogy.
Yngwie koa dia nanoratra ny rakitsary mivantana Concerto Suite ho an'ny gitara elektrika sy orkestra ao amin'ny trano kely tsy ampy taona, Opus 1 miaraka amin'ny The New Japan Philharmonic Orchestra, izay misy ny forongony. Ny gitara irery no gitara ary miavaka ny zava-bitany. ”
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny tarehin'i Niccolo Paganini sy Yngwie Malmsteen dia tsy miova, indrindra fa amin'ny sarin'i Malmsteen fony izy mbola tanora. Ny firafitry ny taolam-paty dia tsy maintsy mijanona amin'ny ankamaroany, fa ny orona, izay vita amin'ny cartilage sy ny tavy mena, dia mety miovaova amin'ny fiainana mandra-pahafatiny, araka ny hita ao amin'io tranga io.
Innate Talent: Araka ny voamarik'io tranga fampihorohoron'ny zavamananaina io sy ny hafa, ny fitaovana henjana iray avy amin'ny vanim-potoana taloha dia natsangana ary nampihatra ny fahaizany niainany taloha tamin'ny gitara elektrika. Izany koa dia hita amin'ny tranga momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao Francesco Geminiiani | Jimmy Page.
Fiovana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-monina: Teraka tany Italia i Paganini, fa i Yngwie Malmsteen kosa avy any Soeda.